Koofiyadaha Indianapolis | Martech Zone
Sabtida, Juun 3, 2006 Sabtida, Juun 12, 2014 Douglas Karr
Jimcahan, waxaan ku lahaa sharaf inaan ka soo qayb galo kulan aan la yeeshay qaar ka mid ah shirkadaha aadka loo metelo iyo hogaamiyaasha warshadaha maxalliga ah si aan ugala shaqeeyo Colts dadaalkooda socda ee ah "Ka dhig shakhsi" taageerayaashooda. Tani waa urur fantastik ah waxayna leeyihiin xushmad weyn. Waxay ka faa'iideysanayaan kheyraad kasta oo ay suurtagal tahay inay gacanta ku dhigaan si ay u hagaajiyaan xiriirka ay la leeyihiin taageerayaashooda, ayna ugu dhawaadaan hay'adda inta ay kari karaan. Halkii aan ku rogi lahaa mashiinka lacagta, waxaan runtii saadaaliyay in Colts ay noqonayaan "Kooxda Mareykanka" iimaanka ay u hayaan ururka darteed, iyo qaddarinta ay u hayaan taageerayaasha sida adag u shaqeeyay.
Horey ayaan usocdaa, waxaan lashaqeynayaa dhowr shirkadood oo kale si aan uga caawiyo iskuxirka CRM, Webka, Falanqaynta Websaydhka, Emailka, eCommerce, iyo waliba xitaa tikidhada tikidhada si Colts waxbadan uga baran karaan taageere kasta, ula hadlo shaqsi ahaan shaqsiyan , oo waxaad siisaa fursado ay xidid ugu noqdaan kooxda ay ugu jecel yihiin sidii hore oo kale.
Tags: AnalyticsCRMecommerceemaildigaagga Indianapolisshaqsi ka dhigNFLticketing
Dhalasho Wacan Aniga!
Maqaarka Wimpy ee MyJonesSoda.com